Fihetsiketsehana an-trano, tratra sy fitaovam-piadiana
Sarotra noho ny mahazatra ve ity volana novambra ity? Namaky lahatsoratra maro tato ho ato aho momba ny olona very fanatanjahan-tena, ary azoko tsara izany. Raha vao nanomboka ny areti-mandringana dia lohataona ary ny fanaovana jogging any ivelany dia ny 30 minitra fandosirana lavitra ny fiaraha-monina ...
Fanatanjahan-tena amin'ny fanoherana an-trano
Miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny gripa sy ny fitsangantsanganana covid-19 amin'izao fotoana izao, gym maro be no mikatona vetivety indray. Ity fanazaran-tena ity dia azo atao ao an-trano ary mila tarika fanoherana misokatra fotsiny. Ny bandy dia misy sakany samihafa. Arakaraka ny hateviny ny sakany, arakaraky ny fanoherany bebe kokoa no hihasarotra ...
Ao amin'ny Workout amin'ny ririnina any an-trano
Ity misy fampihetseham-batana feno vatana haingana azonao atao ao an-trano izay tsy mila zavatra mihoatra ny tady mitsambikina. Ity fampihetseham-batana ity dia manana fanazaran-tena mitsambikina betsaka mba hampiakarana ny fitempon'ny fonao ao anatin'ny fotoana fohy. Ny tombony azo avy amin'ny fitsambikinana dia maro karazana: mampitombo ny fahafaha-oxygène anao, imp ...